Vanuatu: Maxaa ka dhigay mid ka mid ah meelaha ugu farxadda badan dunida
Mawqifka Iscasilaada Xildhibaanada Golaha Wakiilada ka soo jeeda Beelaha Darafyada+Warar laysla dhexmaraayo
Mid ka mid ah meelaha dhulka ugu farxadda badan ayaa ku taal badhtamaha badda Baasifigga, waa Vanuatu. Dalkan saddex geesoodka ah ee ay ku dhex yaallaan, ku dhawaad 80-ka jasiiradood, ee u dhaw una jira wax gaadha 2,000km bariga Australia, ayaa ka mid ah afarta dal ee ugu farxadda bada dunida.
Sidoo kalena dalalka ka baxsan America waa dalka ugu farxadda badan, marka loo eego sida ay tebisay wakaaladda Happy Planet Index. Kala sarrayntan ayaa lagu kala helaa, fiicnaanta dalkaasi leeyahay, rejada nolosha laga qabo, iyo heerka sinnaanshaha oo ay ku jiraan sidda ummaddaasi degaankeeda iyo wax soosaarkooda u ilaashadeen.
Maxaa dalkan yar ka farxiyey? Tan iyo markii ay xornimadooda ka qaateen Faransiiska iyo ingiriiska sannadkii 1980, guud ahaanba dhulka Vanuatu waxaa iska lahaaa oo haystay dadka dalkani u dhashay, lagamana iibinnin cid shisheeya ah marna. Sannadkii 2011, cilmibaadhis ay sameeyeen Waaxda Xisaabaadka ee Vanuatu oo loo soo gaabiyo (VNSO) ayaa tilmaamaysay dadka haysta dhul ay leeyihiin, in ay ka farxad badan yihiin kuwa aan haysan. Maantana, qiyaastii seddex meelood meel dadka dalkaasi 298,000 ah ee deggan kuna nool meelaha baadiyaha ah, iyo dadka jasiiradaha ku nool badankooduba waxay leeyihiin dhul ay ku noolaan karaan kuna tabcan karaa cuntadooda.
Cilmbaadhis taa la mid ah ayaa Iyana caddaysay, in doofaarka, khudaarta noocyadeeda kala duwan oo uu ka mid yahay Kava (Nooca caleenta cagaaran ah oo mararka qaar loo cuno si uu u yareeyo shakiga iyo welwelka) ay degaankaasi ka buuxaan iyagoo aan wax lacag ah ahayn. Waxa kale ee dadka jasiiraddan deggan farxaddooda u sababta ah ayaa ah ‘xidhiidhka qotada dheer ee ka dhaxeeya dhaqankooda, quruxda dabeecadda iyo deegaanka kala duwan ee ku xeeran’. Vanuatu, oo ah magaca dalkan waxa uu la micne yahay ‘Dhulkayagii Dhabta ahaa’. Sidoo kale 139-ka luuqadood ee lagaga hadlo degaankan ayaa ka dhigaya inoo sidoo kale yahay, dalalka ugu luuqad yahansan dunida. Afafkan asliga ah ee ay ku hadlaan 92%, dadka u dhashay dalkani ayaa sidoo kale faham xooggan waxa ay la leeyihiin, xayawaanka, dhirta, daaqa, dhulka iyo guud ahaanba deegaanka iyo taariikhdiisa.
Inkasta oo uu hadda dalkani waajahayo caqabado waaweyn. Kuwaas oo lagu qeexo inay dab kor saran yihiin. Vanuatu, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dalalka ugu fudud ee ay ka dhici karaan masiibooyin dabeeci ahi, iyadoo sannadihii la soo dhaafayna ay jasiiradahaas ku xoogganayaan dhul go’ iyo isbeddelka cimillada ee dhanka badda. Taas oo ka dhigaysa in degaankaas loo aqoonsado halka ugu khatarta badan dunida, marka laga eego dhanka masiibooyinka sida laga soo xigtay sannadkii 2014-kii, Qaramada Midoobay.
Sanadkii 2015, Duufaantii Pam ayaa ku dhufatay jasiiraddan, iyada oo sababtay khasaare aad u weyn oo 75,000 oo qof ay hoy la’aanka dhigtay. Laakiin in kasta oo burburka intaa leegi dhacay, dadka deegaankan ayaa si dhakhso leh u bilaabay dib-u-dhiska tuulooyinka, iyaga oo muujinaya adkeysi iyo awooddooda waxqabsi inta ay leegtahay.